Ungasusa kanjani izindebe ezomile?
Izindebe ezimile - inkinga ukuthi, kaningi kunalokho, ingabizwa ngokuthi yonyaka. Ngokuyinhloko, lizizwa libhekene nesimo sezulu esibanda noma sezulu. Kodwa ngoba azikho izigulane ezisabekayo kule ngxenye yomzimba wethu, inkinga ivela ngokunyakaza kwawo. Khona-ke umbuzo uvela, kanjani ukususa izindebe ezomile? Kulesi sihloko sizozama ukunikeza iseluleko.
Ngakho-ke, amathiphu awusizo wokulondoloza izindebe zakho kusuka omile:
Ngaphambi kokuphuma ngakunye emgwaqweni ezindlini kufanele kusetshenziswe ukhilimu okhethekile noma i-balm. Lokhu kuzokuvikela kusuka ekutheni isikhumba esibucayi sezindebe futhi sigcwalise izipanji ngezakhi.
Uma kuvezwa isikhathi eside emisebeni yelanga, kuphakanyiswa ukuthenga i-lip cleaner nge-UV-filter (umphumela welanga), ngoba imisebe yelanga esikhumbeni sezindebe inonya kakhulu, futhi izindlela ezinjalo zizozisiza ukuba zigcine umswakama, okusho ukuthi kubukeka kuhle.
Lapho kuqala isimo sezulu esibanda, kubalulekile ukubambelela embusweni ophuzayo wokuphuza, okungukuthi uphuze okungenani ama-2.5 amalitha ketshezi ngosuku. Ngakho-ke, kunconywa ukuba njalo ube nebhokisi lemanzi elincane esikhwameni sakho, futhi okubaluleke kakhulu, uphuze amanzi kulo, kungakhathaliseki ukuthi ukhona. Lokhu kuzokusiza izindebe zakho ukuba zifakwe ngamanzi amaningi. Ngaphandle kwalokho akufanele akhokhe izindebe zakho, efuna ukubanika umswakama, ngoba izindebe ziyingozi.
Uma uhlela ukuchitha emoyeni isikhathi eside, khona-ke uphonsa esikhwameni se-lipstick yokuhlanzeka, futhi ngokushesha nje lapho kudingekile, gcoba ngesikhumba sezindebe. Abantu abaningi bakhetha ukungasebenzisi imilenze yokuhlanzeka, njengoba bekhanyisa izindebe zabo. Uma ukhona phakathi kwabo, ke uthenge esikhwameni semithi ehlanzekile ekhemisi, okwakhiwa ngamanzi ashisayo. Akushiyi i-sheen enamafutha, ngaphandle kwalokho kuyasiza ezindebe.
Kunconywa izikhathi eziningana ngosuku, yiqiniso, uma izimo zivuma, gcoba izindebe ngobunandi noma ngamafutha omifino. Le nqubo ukuvikela nokuphathwa kahle kwezinsiza ezincane ezindebe, futhi kuzokwenza isikhumba sezindebe singenasiphelo.
Ukuthukuthela nokuqhekeka emaceleni omlomo kubonisa ukuthi umzimba awunakho amavithamini B. Kulesi simo, ungathenga amavithamini anamanzi ekhemisi egcwalisa izikhala ekudleni. Noma udinga ukucebisa ukudla kwakho nge ushizi kanye neminye imikhiqizo yobisi, amaqanda, amakhambi, isibindi, inhlanzi. Amavithamini aleli qembu afakwe kwimvubelo ye-brewer, i-wheat bran kanye nembewu yamathanga.
Kunconywa okungenani okwesikhathi esifushane ukwenqaba ukusetshenziswa kwesigwegwe esiqinile sezindebe, ngoba i-lipstick enjalo iyabancipha, ngaleyo ndlela igqugquzele ukukhuphuka komswakama. Lokhu kungenxa yokuthi le-lipstick enjalo ifinyelela ngokujulile kwisikhumba sethenda esingavinjelwe sezindebe. Esikhathini esingaphandle-yisikhathi sinembile futhi sisebenziseka kakhulu ukusebenzisa i-lipstick yamafutha.
Kuwusizo kakhulu ukuthi izindebe zihlaziye izinyosi zamazinyo okungenani kanye ngesonto, kuphela ukushayela kufanele kube lula. Ngenxa yokusikhipha, izindebe zizothola ukugeleza kwegazi okwanele kanye nokunyuka kwemvelo kwemvelo.
Ungasebenzisi i-toothpaste ngokuqukethwe okwenyuka kwe-fluoride (okungenani okwesikhashana), ngoba unamathisela okunjalo kusiza ukwandisa ukoma kwezindebe. Ngaphezu kwalokho, kungabangela inqubo yokuvuvukala ezungeze izindebe, okuzobe sekufanele kuphulukwe.
Njalo kusihlwa, ngokunakekelwa kwesikhumba sakho, unake kakhulu isikhumba sezindebe. Ukwenza lokhu, kunconywa ukuthenga umkhiqizo okhethekile esikhumba sezindebe ngamavithamini A no E. Emva kwakho konke, ukuntuleka kwamavithamini emzimbeni kubangelwa ukuma, ukucubungula nokubunjwa kwamaphutha amancane esikhumbeni sezindebe. Uma ukusebenzisa izindlela zangaphandle kungenzi umphumela, kuyadingeka ukuthi ufake phakathi kwemikhiqizo yakho yokudla enezinto eziphakeme zamavithamini. Kodwa-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi imbangela yokumelela nokugqwala kwezindebe kungase kube yi-vitamin A. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukugcina isilinganiso kukho konke.
Ungasusa kanjani isikhumba esomile sezindebe usebenzisa amaski
Ukusuka komile wezindebe kungasusa ukusebenzisa imaski ekhethekile, okumele kwenziwe ngeviki okungaphezu kokuphindwe kabili. Amaski alungiswa imikhiqizo yawo ejwayelekile:
Mask of cottage shizi kanye izaqathe. Thatha isipuni se-cottage shizi kanye nesoso sesanqante, uhlanganise kahle bese ubeka izindebe imizuzu engu-15.
Mask of ibhotela kanye apula. I-Apple kathathu nge-grater, ithotela le-bhotela (ungashisi), thatha isipuni esisodwa se-apple eshukile, nesipuni esisodwa samafutha, uhlanganise kahle bese ubamba imizuzu engu-15 ezindebeni.
Mask of amafutha linseed noma amafutha lwesinaphi. Amafutha asetshenziselwa izindebe imizuzu engu-15, ngaleyo ndlela anikeze ekondleni okweziwe kwezindebe.
Ngenxa yokuvuvukala kwezindebe kunconywa ukuba usebenzise i-swab yesikotini efakwe ku-tincture eqinile ye-chamomile.
Uma uhlobisa futhi ugoqa isikhumba sezindebe, akufanele kuqedwe, kungcono ukunamathela kumaminithi angu-10 noma ngaphezulu i-swab yesikotini efakwe ebhodini elivamile eliqinile. Futhi ukuphunga okuqhubekayo ngebhayisikili elithambile kuzokwenza ukuthi inkinga ingabikho kahle. Ukusebenzisa njalo i-compress kusuka itiye kuyovumela isikhathi eside ukugcina umbala ocacile wep lip.
Ngosizo lwezivivinyo ezilula ungenza izindebe zakho zibe zihle kakhulu.
Ngakho-ke, ake siqale izivivinyo.
Ngenye indlela, silula izindebe zethu "tube" phambili futhi siziphumule. Kule ndawo, izindebe ziyasiza kakhulu ukushaya.
Sithinta izihlathi zethu, sivale amazinyo ethu, futhi, njengokungathi, siphumelela umoya ngamandla, ngenkathi sizama ukungabethi amahlathi ethu.
Ngomzamo, sidinga izindebe zethu futhi sisho imisindo "o, u, y, a".
Imilenze yenza "inhlanzi" - sidonsa izingxenyana zezindebe ngaphakathi, futhi sigcina izindebe zethu kule ndawo isikhashana.
Lezi zivivinyo zizoqinisa imisipha yomlomo, isebenzise ukugeleza kwegazi okungeziwe, futhi wenze izindebe zikhangeleke nakakhulu.
Ukunakekelwa kwesikhumba ngesikhathi sentshaka
Ukunakekela isikhumba esomile ebusika ekhaya
Indlela yokwenza ubuhlungu besisindo sokuphuza isisindo
Ukukhathazeka, ubulili ngobusuku obulodwa nezizathu eziyishumi zokuba yingxenye
I-avovocado isaladi ne-bacon
Iklabishi nelayisi ku-multilayer
Indoda enhle kunazo zonke ku-Intanethi
AmaBean Black Beans eChile